Instagram မှာ Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ Nail Artist ၆ ဦး
1 Feb 2018 . 12:57 PM
ပျိုမေလေးတွေ လက်သည်းပုံဖော်ကြတဲ့အခါတိုင်း ဘယ်ဒီဇိုင်းပုံဖော်ရမယ်ဆိုတာကို အမြဲစဉ်းစားရခက်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ လက်သည်းဒီဇိုင်းပုံလေးတွေ တွေ့မိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သိမ်းထားခဲ့ရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ လက်သည်း ဒီဇိုင်းပုံစံအမိုက်စားလေးတွေကို Instagram မှာ ရှာလို့ရနိုင်ပါတယ်။
၁။ Breanna Robak (nailsbybree)
Breanna က 411 Studio & Boutique Salon ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူပုံဖော်ထားတဲ့ လက်သည်း ဒီဇိုင်းတွေက အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ အရောင်စုံတယ်။ ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်း ဆန်းတယ်။ Halloween လက်သည်းဒီဇိုင်းတွေဆို သူများတွေထက် သေသပ်တယ်။ အရောင်တွေ သုံးထားတာလည်း စုံတယ်။ လက်သည်းဒီဇိုင်းမှာ အဓိကက အရောင်ကစားတတ်ဖို့နဲ့ ဒီဇိုင်းသေသပ်ဖို့ပါပဲ။
၂။ Yukimi (minmin_nail)
Yukimi ကတော့ Japanese Nail Artist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ပန်းပုံ လက်သည်းဒီဇိုင်းလေးတွေ ဖော်တာများတယ်။ သူပုံဖော်တဲ့ 3D ပန်းပုံလေးတွေဟာ လက်ရောက်မြောက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အရောင်အနုလေးတွေနဲ့ အရောင်ရင့်လေးတွေ ရောပြီး ပုံဖော်လေ့ရှိပါတယ်။ ပန်းပုံလေးတွေအပြင် Mable ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်း ဖော်ပါသေးတယ်။ အနီရောင်နဲ့ အသားရောင်ကတော့ သူအသုံးများတဲ့ အရောင်လေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
၃။ Marie Nails (marienails)
Marie Nails က Professional Nail School ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဒီဇိုင်းသီးသန့်တွေများပါတယ်။ Modern Design လေးတွေ ပုံဖော်တာများပါတယ်။ ပန်းပုံစံ လက်သည်းပုံဖော်တာတော့ နည်းပါတယ်။ Nail School ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်သည်းပုံဖော်ရတာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ သွားရောက်လေ့လာလို့လည်း ရပါတယ်။
၄။ Vanity Projects (vanityprojects)
Vanity Projects ကတော့ လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆိုင်မှာ လာပြီး လက်သည်းပုံဖော်ထားသမျှကို တင်လေ့ရှိပါတယ်။ သူလည်းပဲ Modern Design လေးတွေ များပါတယ်။ အရောင်လေးတွေ ရိုးပြီး ဒီဇိုင်းလေးတွေဆန်းပါတယ်။ Fashion Nail Art ပုံစံမျိုးသွားပါတယ်။ အများဆုံးပုံဖော်ဖြစ်တဲ့ အရောင်ကတော့ အမည်းရောင်လေးတွေများပါတယ်။
၅။ Nina Park, Nail Art. Boston.(ninanailedit)
Nina က Nail Art ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ လက်သည်းဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့ ရိုးရိုးလေးတွေများပါတယ်။ သုံးတဲ့ အရောင်လေးတွေက အရောင်လွင်လွင်လေးတွေနဲ့ လူငယ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Gracie J, Nail Stylist/Artist (theeditorialnail)
Gracie ကတော့ လက်သည်းပုံဖော်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သူပုံဖော်ထားတဲ့ လက်သည်းဒီဇိုင်းလေးတွေလည်း Modern Design လေးတွေများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူများနဲ့ မတူဘဲဆန်းဆန်းပြားပြားဒီဇိုင်းလေးတွေလည်း ဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက Fashion အကျဆုံး မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ lifestyle တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဝေဝေဆာဆာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Akhayar Lifestyle Instagram ကို Follow လုပ်ထားပြီး ဘယ်ပွဲလမ်းသဘင် ဘယ်နေရာအနေအထားနဲ့ ဘယ်လို Fashion မျိုးက အလိုက်ဖက်ဆုံးလဲဆိုတာ ဝင်လေ့လာလို့ရနေပါပြီ။ တစ်ကယ့်ကို Fashion အကျဆုံး မိန်းကလေးတွေချည်း စုစည်းပေးထားတာမို့ Inspiration တစ်ခုအနေနဲ့ သေချာပေါက် Followထားသင့်တာအမှန်ပါ။
Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ကူးယူသုံးစွဲနေသ
ည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အခရာစာမျက်နှာအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဝေမျှသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သော်လည်း စီပွားဖြစ်တည်ထောင်ထားသည့် စာမျက်နှာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကူးယူတင်ဆက်နေသည်များကိုမူ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုဖြစ်စေ ၊ အပုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ပိုဒ်ခြင်းဖြစ်စေ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါက ခိုးယူသုံးစွဲနေသည့် စာမျက်နှာများကို အမည်နှင့်တကွ အများသိစေရန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
Instagram မှာ Follow လုပျထားသငျ့တဲ့ Nail Artist ၆ ဦး
ပြိုမလေေးတှေ လကျသညျးပုံဖျောကွတဲ့အခါတိုငျး ဘယျဒီဇိုငျးပုံဖျောရမယျဆိုတာကို အမွဲစဉျးစားရခကျတတျကွပါတယျ။ ကိုယျသဘောကတြဲ့ လကျသညျးဒီဇိုငျးပုံလေးတှေ တှမေိ့တဲ့အခြိနျတိုငျးမှာ သိမျးထားခဲ့ရငျ ဒီလိုတှဖွေဈလာစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ လကျသညျး ဒီဇိုငျးပုံစံအမိုကျစားလေးတှကေို Instagram မှာ ရှာလို့ရနိုငျပါတယျ။
Breanna က 411 Studio & Boutique Salon ပိုငျရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး သူပုံဖျောထားတဲ့ လကျသညျး ဒီဇိုငျးတှကေ အရမျးမိုကျပါတယျ။ အရောငျစုံတယျ။ ဒီဇိုငျးလေးတှလေညျး ဆနျးတယျ။ Halloween လကျသညျးဒီဇိုငျးတှဆေို သူမြားတှထေကျ သသေပျတယျ။ အရောငျတှေ သုံးထားတာလညျး စုံတယျ။ လကျသညျးဒီဇိုငျးမှာ အဓိကက အရောငျကစားတတျဖို့နဲ့ ဒီဇိုငျးသသေပျဖို့ပါပဲ။
Yukimi ကတော့ Japanese Nail Artist တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူက ပနျးပုံ လကျသညျးဒီဇိုငျးလေးတှေ ဖျောတာမြားတယျ။ သူပုံဖျောတဲ့ 3D ပနျးပုံလေးတှဟော လကျရောကျမွောကျတာကိုတှရေ့မှာပါ။ အရောငျအနုလေးတှနေဲ့ အရောငျရငျ့လေးတှေ ရောပွီး ပုံဖျောလရှေိ့ပါတယျ။ ပနျးပုံလေးတှအေပွငျ Mable ဒီဇိုငျးလေးတှလေညျး ဖျောပါသေးတယျ။ အနီရောငျနဲ့ အသားရောငျကတော့ သူအသုံးမြားတဲ့ အရောငျလေးတှလေို့ပွောလို့ရပါတယျ။
Marie Nails က Professional Nail School ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ ဒီဇိုငျးသီးသနျ့တှမြေားပါတယျ။ Modern Design လေးတှေ ပုံဖျောတာမြားပါတယျ။ ပနျးပုံစံ လကျသညျးပုံဖျောတာတော့ နညျးပါတယျ။ Nail School ဖွဈတဲ့အတှကျ လကျသညျးပုံဖျောရတာ စိတျဝငျစားတဲ့သူတှေ သှားရောကျလလေ့ာလို့လညျး ရပါတယျ။
Vanity Projects ကတော့ လကျသညျးအလှပွငျဆိုငျသကျသကျဖွဈပါတယျ။ သူ့ဆိုငျမှာ လာပွီး လကျသညျးပုံဖျောထားသမြှကို တငျလရှေိ့ပါတယျ။ သူလညျးပဲ Modern Design လေးတှေ မြားပါတယျ။ အရောငျလေးတှေ ရိုးပွီး ဒီဇိုငျးလေးတှဆေနျးပါတယျ။ Fashion Nail Art ပုံစံမြိုးသှားပါတယျ။ အမြားဆုံးပုံဖျောဖွဈတဲ့ အရောငျကတော့ အမညျးရောငျလေးတှမြေားပါတယျ။
Nina က Nail Art ပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ လကျသညျးဒီဇိုငျးလေးတှကေတော့ ရိုးရိုးလေးတှမြေားပါတယျ။ သုံးတဲ့ အရောငျလေးတှကေ အရောငျလှငျလှငျလေးတှနေဲ့ လူငယျကွိုကျဖွဈပါတယျ။
Gracie ကတော့ လကျသညျးပုံဖျောတဲ့ ပညာရှငျတဈယောကျပါ။ သူပုံဖျောထားတဲ့ လကျသညျးဒီဇိုငျးလေးတှလေညျး Modern Design လေးတှမြေားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမြားနဲ့ မတူဘဲဆနျးဆနျးပွားပွားဒီဇိုငျးလေးတှလေညျး ဖနျတီးလရှေိ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက Fashion အကဆြုံး မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှု၊ lifestyle တှကေို တဈနရောတညျးမှာ ဝဝေဆောဆာကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ Akhayar Lifestyle Instagram ကို Follow လုပျထားပွီး ဘယျပှဲလမျးသဘငျ ဘယျနရောအနအေထားနဲ့ ဘယျလို Fashion မြိုးက အလိုကျဖကျဆုံးလဲဆိုတာ ဝငျလလေ့ာလို့ရနပေါပွီ။ တဈကယျ့ကို Fashion အကဆြုံး မိနျးကလေးတှခေညျြး စုစညျးပေးထားတာမို့ Inspiration တဈခုအနနေဲ့ သခြောပေါကျ Followထားသငျ့တာအမှနျပါ။
Facebook လူမှုကှနျရကျပျေါတှငျတငျဆကျနသေညျ့ စာမကျြနှာမြားတှငျ အခရာမှတငျဆကျထားသညျ့ ဆောငျးပါးမြား၊ သတငျးမြားကို ခှငျ့ပွုခကျြ တဈစုံတဈရာ ရယူထားခွငျးမရှိဘဲ စီးပှားဖွဈ ကူးယူသုံးစှဲနသေ
ညျမြားကို တှရှေိ့နရေပါသညျ။ အခရာစာမကျြနှာအား တဈဦးတဈယောကျခငျြး ဝမြှေသညျကို အသိအမှတျပွုကြေးဇူးတငျသျောလညျး စီပှားဖွဈတညျထောငျထားသညျ့ စာမကျြနှာမြား၊ ဝကျဘျဆိုကျမြားတှငျ ကူးယူတငျဆကျနသေညျမြားကိုမူ ပွငျးထနျစှာကနျ့ကှကျပါသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတငျဆကျနသေညျ့ အကွောငျးအရာမြားထဲမှ စာသားအခြို့ကိုဖွဈစေ ၊ အပုဒျလိုကျဖွဈစေ ၊ တဈပိုဒျခွငျးဖွဈစေ ကူးယူသုံးစှဲခွငျးမပွုရနျနှငျ့ ဆကျလကျပွုလုပျပါက ခိုးယူသုံးစှဲနသေညျ့ စာမကျြနှာမြားကို အမညျနှငျ့တကှ အမြားသိစရေနျကွညောသှားမညျဖွဈပွီး ဥပဒအေရ အရေးယူမညျဖွဈကွောငျး သတိပေးကွညောအပျပါသညျ။